सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्लान रत्नमन्दिर र हिमागृह ? | suryakhabar.com
Home प्रदेश गण्डकी प्रदेश सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्लान रत्नमन्दिर र हिमागृह ?
on: ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १४:५४ In: गण्डकी प्रदेशTags: No Comments
११ फागुन, पोखरा / फेवातालको किनारैमा छ, पोखराको राजदरबार । जसलाई रत्नमन्दिर र हिमागृह भनेर चिनिन्छ । राजा महेन्द्रले श्रीमती रत्न राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा विसं। २०१३ सालमा बनाउन शुरू गरेका रत्नमन्दिर दरबार २०१५ सालमा बनाउन सकिएको थियो ।
राजा महेन्द्रका माइला भाइ हिमालय वीर विक्रम शाहले २०३६ मा हिमागृह बनाएका थिए । यी दुई दरबार लेकसाइडमा घुम्ने धेरैले नदेखेको हुनुपर्छ । किनकी, फेवातालको बाराहीघाट गएका जो कोहीले पनि नेपाली सेनाको क्याम्प र ड्युटी बसिरहेका सैनिक देख्न सक्छन् । सेनाले सर्वसाधारणलाई भित्र छिर्न दिँदैनन्, सर्वसाधारण भित्र छिर्न पाउने प्रावधान ट्रष्टले बनाइसकेको छैन ।
मन्त्री लम्सालले तत्कालीन नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँगको सहमतिसँगै भ्रमण वर्षमै सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने जानकारी दिएका थिए । नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन सचिव ठाकुरले पनि भ्रमण वर्ष २०२० लाई नै लक्षित गरेर रत्नमन्दिर खुलाउन तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए। “राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा आएसँगै सर्वसाधारणको हितका लागि यो सम्पत्तिको उपयोग गर्ने हो । यसैअनुरुप रत्नमन्दिर खुल्छ, सञ्चालनको अधिकार सबै नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतनै हुन्छ”, उनले गत पुस १० गते नै भनेका थिए । जुन सामाचार ‘भ्रमण वर्षमा रत्नमन्दिर खुला गरिने’ शीर्षकमा छापिएको थियो । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा हुनुपर्छ भने पनि अहिले दिन मिल्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भनेका थिए ।
त्यस यता कोभिड– १९ को असरले सबै कुरा ठप्प भयो । भ्रमण वर्ष पनि प्रभावित हुने नै भयो । योसँगै पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका भानुभक्त ढकाल गत माघ १ गते पोखरा आएका थिए । पोखरा पर्यटन परिषद्ले समसामयिक पर्यटनको बारेमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पनि रत्नमन्दिरको बारेमा भन्नुभयो, “पोखरामा रत्नमन्दिरको विषयमा पनि धेरै कुरा उठेको रहेछ, रत्नमन्दिर खुला गर्न, कहाँ गाँठो परेको हो, म फुकाउने प्रयास गर्छु ।”
उनी मञ्चमा भाषण गरेर गएको पनि एक महिना बढी समय भइसकेको छ, जहाजबाट उडेसँगै उनले फेरि रत्नमन्दिर सम्झनुभयो वा भएन अझै पोखरेलीले भेउ पाएका छैनन् । यसैगरी यही फागुन २ गते नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि रत्नमन्दिर र हिमागृहको अवलोकन गरे । रत्नमन्दिर सर्वसाधरणका लागि खुला गर्नुपर्छ भनेर निकै पहल गरिरहेका गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी र अन्य सरोकारवालाबीच पनि उपप्रधानमन्त्रीले उस्तै आश्वासन दिए ।
बङ्गला शैलीको रत्नमन्दिरमा दक्षिण भारतबाट ल्याइएका बेतका खाटलगायतका सामग्रीसहित कलात्मक किसिमले सजावट गरिएको छ । राजा महेन्द्रका माइला भाइ हिमालय वीरविक्रम शाहले पनि रत्नमन्दिर नजिकै बनाएको हिमागृह त्यहाँ देख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बैठक कोठा छुट्टाछुट्टै छन् भने भान्छा पनि अलग्गै छन् । दरबारभित्र रहेका सबै सामग्री सुरक्षित राखिएका छन् । सबै सिसी क्यामेराको निगरानीमा छन् । रत्नमन्दिर परिसरबाट फेवाताल पारी रानीवन र माथि विश्वशान्ति स्तुप सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ । रत्न मन्दिरमा नेपालका पहिलो जननिवार्चित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला पुगेको कुरासमेत बिपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् ।
सो रत्नमन्दिरको ऐतिहासिक महत्व रहेको र यसलाई पर्यटन ‘प्रोडक्ट’ को रुपमा ल्याएर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने भन्दै पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले रत्नमन्दिरको बारेमा पटकपटक आवाज उठाए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको बताए । “हामीले निकै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं, सबै नेता मन्त्री आउनुहुन्छ, अवलोकन गर्छन् , आश्वासन दिएर जान्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन”, उनले भने, “नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत रहेका अन्य ठाउँका ऐतिहासिकस्थल सञ्चालनमा आएको तर पोखराको रत्नमन्दिर र हिमागृह सञ्चालनमा देखिएको सुस्तताले हामीमा केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेको प्रष्ट हुन्छ ।”
तत्काल लाभ लिन सकिने यस्ता ठाउँको निर्णयलाई महत्वदिएर अघि बढ्न सरोकारवाला निकायलाई उनको आग्रह छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले लामो समयदेखि सर्वसाधारणले यसका अवलोकन गर्न पाउनुपर्छ भनेर आफूले पहल गरिरहेको बताए । “नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटनबाटै खोल्ने तयारी थियो, केही प्राविधिक कारणले पर स¥यो, त्यसलगत्तै कोभिड– १९ असर प¥यो, अब भने सर्वसाधारणले रत्नमन्दिर र हिमागृहको अवलोकन गर्न छिट्टै पाउनुहुनेछ भन्ने आशा लागेको छ”, उनले भने, “ट्रष्टका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वरले पोखरेलले हालै यसको अवलोकन गरेर निकै चासो दिएकाले पनि अब छिट्टै खुल्नेमा आफूहरु आशावादी रहेका छौं ।” उनले रत्नमन्दिरमा आकर्षक पार्क बनाउनका लागि आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट २५ लाख रकम छुट्टाइए पनि रत्नमन्दिर खुला हुन नसक्दा फ्रिज भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल रत्नमन्दिर हिमागृृह संरक्षणका लागि प्रदेश सरकराले एक करोड बजेट छुट्टाएको छ ।
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १४:५४